Nhoroondo yekambani - Newsway Valve Co., Ltd.
Nezve Newsways Valve
Newsway Valve CO., LTD inyanzvi maindasitiri mavharuvhu mugadziri uye ekisipota makore anopfuura makumi maviri nhoroondo, uye ane zviuru makumi maviri neshanu zvakafukidzwa musangano. Isu tinotarisa pane dhizaini, kugadzira, kugadzira. Newsway Valve inonyatso kuenderana neepasi rose mhando sisitimu yakajairwa ISO9001 yekugadzira. Zvigadzirwa zvedu zvinobata yakazara komputa-yakabatsira dhizaini masystem uye akaomesesa makomputa manhamba zvigadzirwa mukugadzira, kugadzirisa uye kuyedza. Tine yedu pachedu yekuongorora timu kudzora mavhavha mhando zvakanyatso, timu yedu yekuongorora inoongorora vharuvhu kubva kwekutanga kukanda kune yekupedzisira package, ivo vanoongorora ese maitiro mukugadzirwa. Uye isu zvakare tinoshanda pamwe rechitatu rekuongorora dhipatimendi kubatsira vatengi vedu kutarisa mavharuvhu asati atumirwa.
We dzidzira mu mavharuvhu bhora, gedhi mavharuvhu, cheki mavharuvhu, pasi vharafu, shavishavi mavharuvhu, chivhariso mavharuvhu, strainer, kudzora mavharuvhu. Izvo Zvinyorwa Zvakawanda zviri WCB / A105, WCC, LCB, CF8 / F304, CF8M / F316, CF3, CF3, F4A, F5A, F11, F22, F51 HASTALLOY, MONEL, ALUMINUM ALLOY nezvimwewo saizi yevhavha kubva pa 1/4 inch (8 MM) kusvika 80 inch (2000MM). Mavharuvhu edu anoshandiswa zvakanyanya kuOiri neGesi, Petroleum Refinery, Chemical uye Petrochemical, Mvura uye Wast Mvura, Kurapa Kwemvura, Mining, Marine, Simba, Pulp maindasitiri uye Pepa, Cryogenics, Kumusoro kwerwizi.
Kubatsira uye zvinangwa
Newsway Valve inokosheswa kwazvo kumba nekune dzimwe nyika. Kunyangwe paine kukwikwidza kunotyisa mumusika mazuva ano, NEWSWAY VALVE inowana kugadzikana uye kushanda kwakanaka kuri kutungamirwa neyedu manejimendi, ndiko kuti, inotungamirwa nesainzi & tekinoroji, inosimbiswa nehunhu, inonamira kutendeseka uye kunanga pane basa rakanakisa .
Isu tinopfuurira mukutsvaga kugona, edza kuvaka Newsway brand. Kuedza kukuru kuchaitwa kuzadzisa kufambira mberi pamwe nekusimudzira pamwe nemi mese.